Yini i-Nofollow, Dofollow, UGC, noma i-Sponsored Links?
ULwesine, April 1, 2021 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 2, i-2021 Douglas Karr
Nsuku zonke ibhokisi lami lokungenayo ligcwala izinkampani zogaxekile ze-SEO ezinxusa ukubeka izixhumanisi kokuqukethwe kwami. Kungukusakazwa okungapheli kwezicelo futhi kuyangicasula impela. Nakhu ukuthi i-imeyili ivame ukuhamba…
Ngibonile ukuthi ubhale le ndatshana emangalisayo ku- [igama elingukhiye]. Sibhale nodaba oluningiliziwe ngalokhu. Ngicabanga ukuthi kungangeza okuhle ku-athikili yakho. Ngicela ungazise uma ukwazi ukukhomba i-athikili yethu ngesixhumanisi.
Okokuqala, bahlala bebhala i-athikili sengathi bazama ukungisiza nokwenza ngcono okuqukethwe kwami ​​lapho ngazi kahle ukuthi bazama ukwenzani… beka i-backlink. Ngenkathi izinjini zokusesha zikhomba kahle amakhasi akho ngokuya ngokuqukethwe, lawo makhasi azolinganiswa ngenombolo yamasayithi afanele, asezingeni eliphakeme axhumene nawo.
Siyini isixhumanisi seNofollow? Uyasilandela isixhumanisi?
A Isixhumanisi esingenalutho isetshenziswa ngaphakathi kwethegi yehange HTML ukutshela injini yokusesha ukuthi ingasinaki isixhumanisi uma kukhulunywa ngokudlulisa noma yiliphi igunya ngayo. Lokhu kubukeka kanjani ku-HTML eluhlaza:
Manje, lapho isiseshi sezinjini zokusesha sikhasa ekhasini lami, sikhomba okuqukethwe kwami, futhi sinquma ama-backlinks ukuthi anikeze igunya emuva emithonjeni… ayikunaki akukho okulandelayo izixhumanisi. Kodwa-ke, ukube bengixhumanise nekhasi lokuya ngaphakathi kokuqukethwe engikubhalile, labo omaki behange abanayo imfanelo engeyona elandelayo. Labo bayabizwa Izixhumanisi ezingafani. Ngokuzenzakalelayo, sonke isixhumanisi sidlula igunya lesikhundla ngaphandle kokuthi ingezwe imfanelo rel, futhi nekhwalithi yesixhumanisi iyanqunywa.
Ngokuthokozisayo, izixhumanisi ezingekho emthethweni zivame ukuboniswa ku-Google Search Console. Nakhu ukuthi kungani:
Ngakho-ke Dofollow Links Nomaphi Usize Izinga Lami?
Lapho kutholakala ikhono lokukhohlisa izinga ngokusebenzisa i-backlinking, imboni eyizigidigidi yaqala ubusuku bonke ukusiza amakhasimende akhuphukele ezingeni lawo. Izinkampani ze-SEO zizenzele futhi zakhiwa xhuma amapulazi futhi wanyathela igesi ukuze asebenzise izinjini zokusesha. Vele, iGoogle iqaphele… futhi konke kwehla.
I-Google ithuthukise ubuchule bayo bokuqapha izinga lamasayithi anqwabelene nama-backlinks nawo efanele, izizinda ezinegunya. Ngakho-ke, cha… ukungeza izixhumanisi noma kuphi ngeke kukusize. Ukuqoqa ama-backlink kumasayithi afanelekile futhi anegunya kuzokusiza. Ngokuphambene nalokho, ukugaxekile kokuxhumanisa kungenzeka kulimaze ikhono lakho lokulinganisa ngoba ubuhlakani beGoogle bungabuye buhlukanise ukukhohlisa futhi kukujezise ngakho.
Ingabe Isixhumanisi Sombhalo Sibalulekile?
Lapho abantu behambisa izindatshana kimi, ngivame ukuzibona zisebenzisa amagama asemqoka asobala kakhulu ngaphakathi kombhalo wazo wehange. Angikholwa ngempela ukuthi ubuchule be-Google bulula ngendlela ehlekisayo kangangokuba umbhalo ongaphakathi kwesixhumanisi sakho ukuphela kwamagama abalulekile. Ngeke ngimangale uma iGoogle ihlaziya okuqukethwe kokuqukethwe okuzungeze isixhumanisi. Angicabangi ukuthi udinga ukucaca kangako ngezixhumanisi zakho. Noma nini lapho ungabaza, ngincoma amaklayenti ami ukuthi enze okuhle kakhulu kumfundi. Kungakho ngisebenzisa izinkinobho lapho ngifuna ngempela ukuthi abantu babone bese bachofoza isixhumanisi esiphumayo.
Futhi ungakhohlwa ukuthi umaki wehange unikela ngazo zombili umbhalo kanye a isihloko ngesixhumanisi sakho. Izihloko ziyimfanelo yokufinyeleleka yokusiza abafunda izihenqo bachaze isixhumanisi sabasebenzisi babo. Noma kunjalo, iziphequluli eziningi ziyazibonisa futhi. I-SEO gurus ayivumelani ngokuthi ukubeka isihloko sombhalo kungasiza izinga lakho lamagama asemqoka asetshenzisiwe. Kunoma ikuphi, ngicabanga ukuthi kuwumkhuba omuhle futhi ungeza i-pizazz encane lapho othile egcagca phezu kwesixhumanisi sakho bese kwethulwa ithiphu.
Kuthiwani Ngezixhumanisi Ezixhasiwe?
Nayi enye i-imeyili engiyithola nsuku zonke. Empeleni ngiyaziphendula… ngibuza lowo muntu uma engibuza ukuthi ngabe ngifaka isithunzi sami engcupheni yini, ngihlawuliswe uhulumeni, futhi ngikhishwe ezinjinini zokusesha. Kuyisicelo esingenangqondo. Ngakho-ke, kwesinye isikhathi ngivele ngiphendule ngibatshele ukuthi ngingajabula kukho… kuzovele kubabize ama- $ 18,942,324.13 nge-backlink ngayinye. Ngisalinde umuntu ozofaka imali kule mali.
Ngibonile ukuthi ubhale le ndatshana emangalisayo ku- [igama elingukhiye]. Sithanda ukukukhokhela ukubeka isixhumanisi ku-athikili yakho ukukhomba ku-athikili yethu [lapha]. Kungabiza malini ukukhokhela isixhumanisi esilandelwayo?
Lokhu kuyacasula ngempela ngoba kungicela ukuthi ngenze izinto ezimbalwa:
Ukwephula imigomo yesevisi ye-Google - bangicela ukuthi ngifihle isixhumanisi sami esikhokhelwayo kubakhasi beGoogle:
Noma iziphi izixhumanisi ezihloselwe ukukhohlisa I-PageRank noma izinga lesiza emiphumeleni yosesho lwe-Google lingathathwa njengengxenye yohlelo lokuxhumanisa nokwephula i-Google Imihlahlandlela yeWebmaster.
Izinhlelo ze-Google Link
Ukwephula iMithethonqubo Yesifundazwe - bangicela ukuthi ngephule imihlahlandlela ye-FTC kokuvumela.
Uma kukhona ukuxhumana phakathi kogunyazayo nomthengisi abathengi abangeke bakulindele futhi kuzothinta ukuthi abathengi bakuhlola kanjani ukugunyazwa, lolo xhumo kufanele ludalulwe.
Umhlahlandlela Wokuvumela we-FTC
Ukwephula Ithemba Labafundi Bami - bangicela ukuthi ngiqambe amanga ezilalelini zami! Izithameli engizisebenzele iminyaka eyi-15 ukwakha okulandelayo nabazethembayo. Akuqondakali. Futhi yingakho uzongibona ngidalula bonke ubudlelwano kuyo yonke indatshana - noma ngabe isixhumanisi sokuxhumana noma umngani osebhizinisini.
AbakwaGoogle babevame ukubuza ukuthi izixhumanisi ezixhasiwe zisebenzisa akukho okulandelayo imfanelo. Kodwa-ke, manje sebekushintshile lokho futhi banemfanelo entsha exhasiwe yezixhumanisi ezikhokhelwayo:
Maka izixhumanisi eziyizikhangiso noma ukubekwa okukhokhelwayo (okuvame ukubizwa ngokuthi izixhumanisi ezikhokhelwayo) ngenani elixhasiwe.
I-Google, Qeqesha Izixhumanisi Eziphumayo
Lezi zixhumanisi zakhiwe kanjena:
Kungani Ama-Backlinkers Angavele Abhale Amazwana?
Ngenkathi i-PageRank ixoxwa okokuqala namabhulogi ethuthelwa endaweni yesehlakalo, ukuphawula kwakuyinto ejwayelekile. Bekungeyona kuphela indawo emaphakathi yokuba nengxoxo (ngaphambi kwe-Facebook ne-Twitter), futhi kudlulile ezingeni lapho ugcwalisa imininingwane yakho yombhali futhi wafaka isixhumanisi kumazwana akho. Ugaxekile wamazwana wazalwa (futhi kuseseyinkinga kulezi zinsuku). Akuzange kuthathe isikhathi eside ngaphambi kokuthi izinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe nezinhlelo zokuphawula zisungule izixhumanisi zeNofollow kumaphrofayili wombhali wamazwana namazwana.
I-Google empeleni isiqalile ukusekela imfanelo ehlukile yalokhu, ugc. UGC isifinyezo sokuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi.
Ungasebenzisa futhi inhlanganisela yezimpawu. Ku-WordPress, isibonelo, ukuphawula kubukeka kanjena:
Okwangaphandle kungenye imfanelo esenza abakhasi bazi ukuthi isixhumanisi siya ku- zangaphandle indawo.
Ingabe Kufanele Wenze Ukufinyelela Kwe-Backlink Ukuthola Izixhumanisi Ezengeziwe Ezilandelanayo?
Ngeqiniso leli yiphuzu elikhulu lokuphikisana nami. Ama-imeyili e-spammy engiwanikeze ngenhla ayacasula ngempela futhi angikwazi ukuwamela. Ngiyikholwa eliqinile olidingayo uthole izixhumanisi, ungaziceli. Umngani wami omuhle uTom Brodbeck uqambe ngokufanele lokhu linkearning. Ngixhumanisa nezinkulungwane zamasayithi nama-athikili avela kusayithi lami… ngoba bathole isixhumanisi.
Lokho kusho ukuthi, anginankinga ngebhizinisi elifinyelela kimi futhi libuze ukuthi bangakwazi yini ukubhala i-athikili eyigugu ezilalelini zami. Futhi, akuvamile ukuthi kukhona ifayela le- ayize isixhumanisi ngaphakathi kwaleyo ndatshana. Ngiyazenqaba izindatshana eziningi ngoba abantu abathumelayo banikeza i-athikili esabekayo ene-backlink ebonakalayo kuyo. Kepha ngishicilela okuningi okuningi okuyizindatshana ezinhle futhi isixhumanisi umbhali asisebenzisile sizobasiza abafundi bami.
Angikwenzi ukufinyelela… futhi nginezixhumanisi ezicishe zibe yi-110,000 ezixhumanisa emuva nazo Martech Zone. Ngicabanga ukuthi lokho kungubufakazi bekhwalithi yama-athikili engiwavumela kuleli sayithi. Chitha isikhathi sakho ushicilela okuqukethwe okumangazayo… nama-backlinks azolandela.
Tags: ukufinyelela kwe-backlinkukuxhuma emuvaama-backlinksizixhumanisi zokuphawulaukudalulwaayizeizixhumanisi ezingafaniikhomishini yezohweboftci-google search consoleimigomo yesevisi ye-googleGoogle +abahola isixhumanisiikhwalithi yokuxhumanisaukwakha isixhumanisiakukho okulandelayoizixhumanisi ezingenaluthousezingeni lokusesha le-organicizixhumanisi ezikhokhelwayoizixhumanisi zekhwalithiu-relrel dofollowrel nofollowi-rel exhasiwerel ugcabakhasi benjini yokuseshaamazinga okuseshaizixhumanisi ezixhasiweugcugc izixhumanisii-wordpress dofollowi-wordpress nofollow
IScratchpad Command: Indlela esheshayo yokuFinyelela nokuvuselela i-Salesforce kunoma iyiphi i-Web App
Jan 21, 2007 ngo-1: 35 PM
Siyabonga ngokukhomba i-Dofollow plugin Doug. Bengazi ukuthi i-WordPress ingeze i-rel = "nofollow" kuzixhumanisi kumazwana, futhi ngiyavuma impela nomqondo wakho wokuthi inqobo nje uma imibono isenganyelwa, noma yiziphi izixhumanisi ezifanele ezisele kumazwana zifanelwe isikweletu sazo esifanele.
Jan 22, 2007 ngo-2: 42 PM
Ngiyabonga ngethiphu; Ngisanda kufaka i-plug-in (inqubo engenabuhlungu ngokuphelele.)
Lapho kuxoxwa naye ugaxekile wamazwana wathi:
“Ngabe isinyathelo esenziwe yiGoogle, Yahoo kanye neMSN, sokuhlonipha izixhumanisi" ezingalandeli "sehlula uSam nohlobo lwakhe? "Angicabangi ukuthi kuzoba nomthelela omkhulu esikhathini esifushane, esiphakathi noma eside."
Ingxoxo ephelele ilapha:
Jan 22, 2007 ngo-5: 56 PM
UMartin, indatshana enhle. Kazi umsebenzi wakhe ube nzima kanjani ngonyaka odlule!
Ingabe ikhona indlela yokukhetha ukuthi iyiphi ilinki engifuna ukuyivumela ilandelwe (wow, ilukuluku lokwakha ulimi engilenzile)? Isizathu ukuthi lapho ngibhekisela kusayithi elithile le-crappy elinolwazi lwe-crappy kuso, kungcono ngingaliphakamisi kakhulu. Hhayi njengokucwaninga (uma ngibhekisela, ngithi, umbono wezepolitiki ohluke kakhulu kunowami, kepha uma usungulwe kahle futhi ubeke kahle, anginankinga yokuwukhuthaza), kepha njengendlela yokulwa ne-entropy nokumba phansi okuqukethwe crappy.
Anginankinga ngokuhlela izixhumanisi ngesandla. Imvamisa ngihlela ukuphawula ukuze ngengeze izixhumanisi eziphumayo ze-Google Analytics, izihloko zokuxhumanisa nokulungisa izivakashi ukuthayipha, kodwa kuzoba kuhle ukukusebenzisa ngezinga elithile.
Impela, theUg! Ungangeza i-rel = "nofollow" ngaphakathi kwanoma yisiphi isixhumanisi ongafuni ukuthi i-Google ikalwe ngaso. Isibonelo:
Yebo, lokho kungaba lula kunokuzama ukuzisusa. Ngigcina zonke izinto ezisetshenziswa kaningi njengalezo kumanothi wami we-Opera (zilusizo kakhulu ukuba nezicucu, izingcezu, namazwibela ekhodi ngaphakathi kwesiphequluli sakho ngaso sonke isikhathi), ngakho-ke kumane nje kungukunamathisela kimi.
Ngikutholile lokhu. Bekufanele ngabe ubuke ngaphambi kokuxhumana nawe ngefomu lokuxhumana.
Mar 26, 2007 ku-5: 23 AM
Ngiyavuma uDoug. Uma uya enkingeni yokufunda nokuhlolisisa ukuphawula ngakunye noma kunjalo (okufanele ube yikho) ngakho-ke kunengqondo ukuvuza amazwana angempela ngesixhumanisi esifanele.
Uzothola ukuphawula okuningi "okuhle kokuthunyelwe" ngenxa yalokho, kepha lokho kuya ngqo emgqonyeni wokusebenzisa kabusha noma kunjalo.
Abakwa-spammers abasobala banamagama afana nokuthi "uchwepheshe we-SEO" noma "i-Web design Atlanta" noma okuthile igama elingukhiye elilayishiwe. Abangempela bavame ukuba namagama angempela afana no "Lisa" noma "Robert".
Mar 26, 2007 ku-2: 20 PM
Kuhle ukuthi uthathe uhlangothi odabeni lokungalandelwa. Noma yikuphi ukuphawula ngomphumela? Uyitholile imiphumela obuhlose ngayo?
Mar 26, 2007 ku-6: 11 PM
Imiphumela ngeke ibaluleke kangako kimi njengoba izofana nani bantu! Ukuphawula kusayithi lami kufanele kukusize kwizinga lakho le-Google.
Ngo-Apr 27, i-2007 ku-4: i-29 PM
Ngisebenzisa iwebhusayithi ene-Drupal-powered, ngakho-ke ifakwa ngaphandle kwe-rel = nofollow, futhi kufanele ufake i-plugin ukufaka lokhu. Mina noma ngabe ngikwenze lokhu isikhashana, kepha ngabona ukuthi okuwukuphela kwesizathu sokwenza lokho kungumqondo we-puerile wokuthi imibono engiyishiya kumasayithi abanye abantu ayinginiki isikhundla sekhasi, lapho ngibanikeza khona isikhundla sekhasi. Nginqume ukusishiya njengoba sinjalo.
Iningi labantu lilinganisela ukuphawula kwabo ngakho kungani ujezisa labo abazinika isikhathi sokushiya amazwana awusizo kusayithi?
Ngingeze inqubomgomo yokuphawula kusayithi lami ukuze ngingazizwa kabi ngokususa amazwana asendaweni empunga.
Isibonelo, uma othile eshiya amazwana athi "isayithi elihle", ngiphakamisa ukuthi ngisuse amazwana, ngaphandle kokuthi bashiye inkambu ye-URL ingenalutho. Ngaphandle kwenqubomgomo enjalo, ngazizwa ngiphoqelekile ukuthi ngibheke isixhumanisi futhi nginqume ngokususelwa kusayithi.
May 21, 2007 ku-11: 38 PM
Siyabonga ngolwazi, ngifisa ukwazi.
abanye abantu bathi amakhasi asazokhonjwa ngomaki wokungalandeli. ngabe lokhu kuliqiniso?
May 22, 2007 ku-6: 33 AM
Yebo, akuzona zonke izinjini zokusesha ezihlonipha ukulandelwa. Kwenzeka lokhu nje ukuthi iGoogle, ekubeni ngumfana omkhulu ebhlokini, iyakwenza. Angiqiniseki nge-Live, Ask or Yahoo! Kungathatha ukumba ukuthola.
Jun 20, 2007 ku-5: 10 PM
Umsebenzi omuhle - ngiphikisana kakhulu nokulandelayo.
Noma yisiphi isixhumanisi kufanele sibalwe, noma akufanele uvumele isixhumanisi ukuthi sibekhona. Ngiyazi ngabantu abafaka ngamabomu izixhumanisi ezingaphakathi kokuthunyelwe kwabo ukuze bangabi nethoni yezixhumanisi eziphumayo, ngombono wokuthi amasayithi axhumanisa ngaphezu kwalapho exhunywe khona athole i-PR ephansi.
Kungiphatha kabi okungapheli.
IHobo SEO eScotland
Jun 23, 2007 ku-2: 04 PM
Senze okufanayo kubhulogi lethu lezindaba ngaphandle kwemiphumela emihle ngokweminikelo yomsebenzisi nejusi yenjini yokusesha. 🙂
Jul 16, 2007 ku-7: 34 AM
IMO rel = "nofollow" akunamsebenzi ngokuphelele, ngeke imise ukuphawula kogaxekile ngoba abagaxekile basebenzisa isoftware. Isixazululo esihle kakhulu ngokumelene nogaxekile bokuphawula ama-plugins afana ne-Akismet, i-Bad Behavior nama-captcha noma imibuzo yabantu.
Jul 22, 2007 ku-3: 01 AM
yebo? lawoma wiki angenangqondo!
uyazibuza ukuthi kwenzekani uma sonke sisebenzisa okulandelayo kubo?
Jul 29, 2007 ku-3: 30 AM
Sawubona, ngithanda ukubuza ukuthi ngabe i-WordPress, i-Yahoo 360, i-Blogger, njll isebenzisa i- "nofollow" kokuthunyelwe kwebhulogi. okusho ukuthi uma ngibhala okuthunyelwe kubhulogi yami bese ngifaka isixhumanisi kuwo, ingabe isixhumanisi kokuthunyelwe kwami ​​sishintshela ku-rel = nofollow?
Aug 6, 2007 ngo-10: 50 PM
Ngiyabonga kakhulu nge-athikili enhle kakhulu emayelana nemfanelo yokulandela. Ngoba ifakiwe njengedifolthi ku-WordPress, ngisola ukuthi abantu abaningi kabi abazi nokuthi ikhona.
Ngicabanga ukuthi inqubomgomo yokuvumela noma ukungavumeli ukuphawula ngawodwana kunokuba imane yehlise bonke kuyindlela engcono kakhulu.
Aug 15, 2007 ngo-3: 00 PM
Siyabonga ngalokhu okuthunyelwe! Ngiyazi ukuthi ngiphuze ukufika kancane ekutholeni, kepha ngisanda kuqala ukubhuloga futhi ngizama ukuthola ukuthi kungani i-wordpress ye-heck ifaka okungaxhunywanga ezixhumanisweni zami. Ngizofaka ukubonga okungafani nokuthola ibhulogi yakho, mhlawumbe lokho kuzokhuthaza ukuphawula okuningi nokuxhumana kubhulogi lami elisha.
Aug 16, 2007 ku-10: 22 AM
Angiqiniseki ukuthi isiza malini ngokubamba iqhaza. Ngiyacabanga, nokho, ukuthi 'izinyoni zophaphe zindiza ndawonye' ngakho-ke ukwazi ukuxhuma futhi ubambe iqhaza namanye amabhulogi angasebenzisi okulandelayo. Ngokuhamba kwesikhathi, ngicabanga ukuthi kunenzuzo.
Ngiyayithanda nje ngoba ngikholelwa ukuthi impumelelo yami enkulu ekubhulozeni ibiyenziwa ekubambeni iqhaza kwabantu abanjengawe engxoxweni. Kungani kufanele ngithole yonke inzuzo?!
Aug 26, 2007 ngo-6: 58 PM
Ngiyabonga ngalolu lwazi uDoug, bengikade ngengeza ngesandla amathegi ama-rel kuzixhumanisi zami kepha angikaze ngiyicabangele le ndlela yamazwana. Kunengqondo nokho, mhlawumbe ngizoqala ukukwenza lokhu njengoba sengivele ngilinganise ukuphawula kwami ​​ngezinga elikhulu.
Sep 10, 2007 ku-8: 48 AM
Sawubona, ngafaka i-plugin ye-DoFollow ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, futhi ngathola ukubonga okuvela kumabhulogi amancane engiwaxhumanise nezihloko zami namazwana.
Isinyathelo esihle futhi, kepha KUPHELA ngokuhambisana nokuphawula okuqinile / ukuphathwa kwabasebenzisi, ngaphandle kwalokho amabhulogi azoba yimithombo yogaxekile ngokushesha kunokuba sicabanga.
Dec 13, 2007 ngo-8: 31 PM
doug, le nto engeyona elandelayo ibe buhlungu kubo bobabili i-blogger kanye nomhlaziyi osemthethweni… ngifisa sengathi othile angakha i-plugin ezokwenza / ikhubaze okungaxhunywanga ngokuthanda komlawuli. wonke ama-plugins we-nofollo ngiwasebenzisile ukuklebhula ithegi engafakwanga kuwo wonke amazwana kanye / noma umhlaziyi. njengoba usho, abanye abantu bakhetha ukuvuma imibono yabasebenzisi babo
Dec 14, 2007 ku-3: 15 AM
Ngiyavuma, Jessie! I-WordPress ithole leyo mpendulo ngokuzwakalayo nangokucacile, kepha ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi bangaphansi kwengcindezi evela ku-Injini Yokusesha ukuthi bangakwenzi lokho kube inketho.
Dec 14, 2007 ku-5: 52 AM
into ehlekisayo i-doug ukuthi iningi lalabo "abamele" okungafakwanga banezimfanelo ezingekho kumasayithi / amabhulogi abo…. akumnandi yini ukuthi abantu basho okuthile bese benza okunye? ungithakasele ngokuba nedofollow lapha njengakwi-blog yami… angiqiniseki nje ukuthi lokhu kuzothinta kanjani i-PR yami ku-google.
Siyabonga ngokuchaza lokhu. Ngisanda kuqala iwebhusayithi, futhi ngibheka zonke izinketho zebhulogi. Ngeshwa isoftware yebhulogi ekheniwe engingayisebenzisa ne-site yami iyanuka eqhweni, futhi bengicabanga ukusebenzisa i-wordpress, ngakho-ke ngiyabonga ngokukhuluma ngendaba elandelayo noma cha. Nginamawebhusayithi ama-2, elilodwa elingenazo izixhumanisi ze-google emuva, kanti ngolunye usuku isiza sami sesibili siveze ama-backlinks ayi-10 aphuma kokuluhlaza okwesibhakabhaka, futhi ngangijabule kakhulu! Ngithumela kuma-blog ngaso sonke isikhathi futhi bengazi nokuthi ungasithola isixhumanisi ngaleyo ndlela, (duh, newbie!) Futhi ngokungazelelwe ngaba nezixhumanisi eziyi-10 ezivela ku-Dawud Miracle - ungubani yena ???? Ngilandele isixhumanisi emuva esizeni sakhe futhi ngabona ukuthi ngesinye samabhulogi amaningi engangiwathumele, ngiyabonga Miracle, KWAKUNGUMANGALISO !!! Ngibe sengizibuza ukuthi kwenzeke kanjani, nokuthi kungani bekungenzekanga phambilini! Manje sengiyakuthola. Lapho ngithuthukisa isoftware yami yebhulogi ngokuqinisekile ngizoba nokulandelayo, hhayi uhlobo lokungalandelwa. Kunempumelelo eyenele sonke… ..